भाेलीबाट ९० कराेडकाे अर्काे आईपीओ खुल्दै, आबेदन दिन बिर्सनुहोला ! - Abhiyan news
भाेलीबाट ९० कराेडकाे अर्काे आईपीओ खुल्दै, आबेदन दिन बिर्सनुहोला !
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०४:०१ अभियान न्यूजLeaveaComment on भाेलीबाट ९० कराेडकाे अर्काे आईपीओ खुल्दै, आबेदन दिन बिर्सनुहोला !
मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले असोज २० गते, मंगलबार देखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ ।
बिर्सनुहोला है, न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
साहस उर्जाको आईपीओको ओपनिङ्ग रेञ्ज कति पाउने सम्भावना छ त ? थाहा पाउनुहोस !
२७ कार्तिक २०७८, शनिबार ११:२५ news DM